आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् : छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है ! -
Home Flash News आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् : छोरा तिमी फर्कने बाटो...
आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् : छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है !
भुइँमा झरेका सल्लाका पातहरू-लाई जम्मा गर्दै उसले विछ्यायो र आफ्नी बूढी आमा-लाई उठाएर त्यसमाथि राख्यो । त्यसपछि आँ’शु भरिएका आँखा र दुखि`रहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट विदा माग्यो । छोरालाई आफ्नो अन्तिम आदेश दिनेबेलामा निस्वार्थ मायाले भरि-पूर्ण आमाको आवाज काँपि-रहेको थियो ।
‘तिम्रा आँखा-हरू कहिल्यै पनि कम`जोर नहुन् मेरो छोरा!’, उनले भनिन् । ‘पहाडको बाटो ख|तरा नै खत`राले भरिपूर्ण छ । साव`धानीपूर्वक हेर्दै हिंड र जुन बाटोमा रुखविरुवाका हाँगाविंगाहरू थुप्रिएका छन् त्यहि बाटोलाई पछ्याउँदै जाऊ ।
धेरैबेरपछि उसले आफ्नो शिर उठायो र गम्भी|र मुद्रामा भन्यो – ‘हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ’, ‘शायद मैले ‘केश फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ; भन्ने भनाइलाई बिर्सेछु । यति भनेपछि उसले त्यतिखेर नै आफ्नो कठो`र नियमलाई अन्त्य गर्यो र वृद्धवृद्धाहरूलाई मा`र्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । कथा मन परेमा शेय`र गरेर आमाको सम्मान गरौं कथा – जापानी कथा लेखक मात्सुओ बाशो ( अनुवादक अनुप जोशी ) – (साङ्केतिक फिचर तस्बिर)